အတ္တဖြေဆေး – Pann Satt Lann Books
အတ္တာဟိ အတ္ထနော နာထောတွင် မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာဟူသောစကားမှပါဝင်သောအတ္တမှာ ကောင်းမြတ်သောဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ ပညာ၊ စိတ်ဓာတ်တို့ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိကောင်းစွာချယ်မှုန်းသော အတ္တဖြစ်သည်။ ယနေ့လူသုံးများသော အတ္တသည် တကိုယ်ကောင်းစိတ်၊ အနိုင်ယူလိုစိတ်၊ သိမ်းပိုက်လိုသောစိတ်စသော လူသားမဆန်သောစိတ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အတ္တဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်ထဲတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ညစ်နွမ်းစေသော၊ ဆိုးဝါးပျက်စီးစေသော၊ မငြိမ်းချမ်းစေသောအဖြစ် အတ္တအဖြစ်ဖော်ပြထားပြီး ထိုအတ္တအတွက်ဖြေဆေးကိုပါဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ်ဓမ္မစာစဉ်စာပေ၊ 2020၊ ဇွန်လ (ပ-အကြိမ်)
အတ္တဖြေဆေး အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 1 ရှိပါသည်။
အရှင်စန္ဒာသိရီ – September 12, 2020
ဒီစာအုပ်လေးကို စမြင်ကတည်းကနဲနဲထူးဆန်းနေသလိုခံစားရတယ် စာအုပ်ရဲ့ အဖုံးပိုင်းမှာက အနက်ရောင်ဖုံးလွှမ်းနေတယ့်ထဲကို အလင်းတံခါးတစ်ချပ်ပွင့်လာတယ့်ပုံစံလေး စာအုပ်နာမည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အတ္တဖြေဆေးတယ့် တကယ်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ် အတ္တတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ့် အမှောင်ထဲကို အလင်းတံခါးလာဖွင့်ပေးတယ့် စာအုပ်ကလေး
စာအုပ်ဆိုတာကလဲ အပြင်ပန်းကြည့်ရုံနဲ့ ကောင်းမကောင်းသိနိုင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ အထဲကို နဲနဲလေး အမြည်းလေးဖတ်ကြည့်မိတယ် အဲ့ဒီမှာ သဘောကျသွားမိတယ့်စာကြောင်းလေးက
‘ အချစ်ဆုံး’ တဲ့ စကားလုံးလေးက သိပ်လှတာ။
ကိုအတ္တကို ဗဟိုပြုပြီး ရယူထားတဲ့ အချစ်။
ငါ့အတွက်လို့ မှတ်ယူထားတဲ့ အချစ်။
ငါပိုင်ကို ပိုင်ရမယ်ဆို့တဲ့ အတ္တ။
ငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲမှတ်ထားတဲ့ အတ္တ။
အကျဉ်းချုံးကြည့်ရင် အတ္တနဲ့ အချစ်ပဲ။
စကားလုံးလေးက သိပ်ကို ရိုးရှင်းတာ အချစ် + ဆုံး တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ ကိုယ်ရဲ့အတ္တတွေကြောင့် ကိုယ်ချစ်တယ့်လူတွေမဆုံးရှုံးဖို့ ကြိုးစားရင် ဒီအတ္တတွေရဲ့ အမှောင်ထုတွေမှာကျင်လည်နေခဲ့ရတယ်၊ ဒီလိုအခြေ‌အနေမျိုးတွေကို တရားသဘောလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်တယ့်အခါ ရလာတယ့် အကျိုးဆက်ကလေးတွေက စိတ်ကို အေးချမ်းမှု အစစ်အမှန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားတယ်
လူတော်တော်များများ လိုချင်နေကြတယ့် သူတစ်ပါးဆီက ဂရုစိုက်မှု၊ အလေးထားမှု၊ ကြင်နာယုယမှုတွေ စတယ့်လိုချင်တပ်မက်ခြင်းတွေဟာ တကယ်ရော အစစ်အမှန်ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးနိုင်သလား? တကယ်ရော ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သလား? သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်တယ့်အခါ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘယ်ကလာသလဲ? တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ယူရတယ့်အရာမျိုး သူတစ်ပါးဆီက လာတယ့် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာက ခနတာဘဲ သူမရှိတော့ရင်ရော ပျော်ရွှင်နေနိုင်သေးသလား ဘယ်လိုခြေနေဘဲရောက်ရောက် ကိုယ်ကိုကိုယ် ပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာသိရီက အပိုင်းကလေးနဲ့ ခွဲပီးဖော်ပြပေးထားတယ် အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလဲ တကယ်ကိုမှတ်သားစရာ လိုက်နာသင့်တယ်အချက်အလက်ကလေးတွေကို ရေးသားထားတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ နဲနဲစိတ်၀င်စားလိမ့်မယ်လို ထင်ပါတယ် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဖော်ပြတာက နဲနဲလေးဘဲရှိပါသေးတယ် ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ အကျိုးတစ်ခုခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ စာရေးသူ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာသိရီနဲ့အတူ ကျေနပ်ပိတိဖြစ်နေမှာပါ